အိုင်းပက် ၂ (ကွန်ပျူတာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
အိုင်းပက် ၂ (ကွန်ပျူတာ)
2011-04-29: Hong Kong, India, Israel, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, South Africa, South Korea, Turkey, United Arab Emirates
2011-05-06: China, Estonia, Latvia, Lithuania, Thailand
2011-05-27: Russia, Ukraine
Internal rechargeable non-removable ၂၅ W·h (၉၀ kJ) lithium-polymer battery
၉.၇ လက်မ (၂၅၀ မီလီမီတာ) 4:3 aspect ratio Resolution: 1024x768 px (XGA) (1080p – video out via Apple Digital AV Adapter; support simultaneous charging)
Front: Video recording, VGA up to 30 fps with audio, VGA-quality still camera, 0.3 megapixels.
Back: Video recording, 960x720 up to 30 fps with audio, 960x720 still camera with 5x digital zoom, 0.7 megapixels.
Wi-Fi + 3G GSM model also includes: UMTSတမ်းပလိတ်:\_wHSDPA (Quad band–850, 900, 1900, 2100 MHz)
GSMတမ်းပလိတ်:\_wEDGE (Quad band–850, 900, 1800, 1900 MHz)
၉.၅၀ in (၂၄၁ mm) (height)
၇.၃၁ in (၁၈၆ mm) (width)
၀.၃၄၆ in (၈.၈ mm) (depth)
Wi-Fi model: ၁.၃၃ lb (၆၀၀ g)
Wi-Fi + 3G model (GSM): ၁.၃၅ lb (၆၁၀ g)
Wi-Fi + 3G model (CDMA): ၁.၃၄ lb (၆၁၀ g)
အိုင်းပက် ၂ (iPad 2) သည် အက်ပဲလ် (Apple) မှ တီထွင်ရောင်းချသည့် tablet ကွန်ပျူတာ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အိုင်းပက် (iPad) ၏ ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အီးဘွတ်ခ် (e-book)၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ ဖတ်ရှုရန်၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရန်၊ တေးဂီတနားထောင်ရန်၊ ဂိမ်းကစားရန် စသည့် ရုပ်သံ မီဒီယာ (audio-visual media) အတွက် တီထွင်ထားသည့် platform ဖြစ်သည်။ ၁၀ နာရီကြာခံသည့် ဘက်ထရီပါရှိပြီး video calling အတွက် မျက်နှာပြင် နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ကင်မရာတပ်ဆင် ထားသည်။
↑ Siegler၊ MG။ TechCrunch Review — The iPad 2: Yeah, You’re Gonna Want One။ Tech Crunch။ 10 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ iPad – Technical specifications and accessories for iPad။ Apple (January 27, 2010)။ January 27, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Johnston၊ Casey (2011)။ iPad 2: Faster, thinner, lighter; same battery, display resolution။ Ars Technica။ 10 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apple iPad2GPU Performance Explored: PowerVR SGX543MP2 Benchmarked - AnandTech :: Your Source for Hardware Analysis and News။ AnandTech။ 2011-03-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ iPad2AudioPlayback;– Audio format specifications for iPad2။ Apple (March 3, 2011)။ March 3, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gruener၊ Wolfgang (8 March 2008)။5Reasons Why You Should Not Buy The iPad 2။ Tom's Guide။ 10 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်းပက်_၂_(ကွန်ပျူတာ)&oldid=367048" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မေ ၂၀၁၇၊ ၀၇:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။